Kugadzirwa kwakawanda kweiyo iPhone 7 kunotanga | IPhone nhau
IPhone 7 Misa Kugadzira Inotanga; aya ndiwo macamera module ako
Nechekare muna Chikunguru, tave nemwedzi miviri kubva panoratidzwa iyo iPhone 7. Kana pasina zvekushamisika, inotevera iPhone, senge yapfuura, ichaunzwa kutanga kwaGunyana uye ichatanga kutengeswa musi wa20 wemwedzi mumwe chete, saka Apple haigone kutora nguva kutanga kugadzirwa kwakawanda kubva kune imwe yei iPhones ine nharo zvikuru yandinogona kurangarira.
Vhiki rino, account yeTwitter yakatumira tweet ine pikicha iyo inofanirwa kuratidza, kuwedzera kune chikafu chemushandi weFoxconn, pasuru ine akasiyana kamera module yeiyo iPhone 7. Iyo tweet yakaburitswa China rapfuura, Chikunguru 7 neakaunti @Iyo_Malignant.
IPhone 7 Kamera Module
#iPhone7 kugadzirwa kwemisa kwatanga.
Batch remakamera module… ngatiendei kuzoshanda nedumbu rakazara kuFoxconn pic.twitter.com/kKDNTkFjK0
- The Malignant (@the_malignant) July 7, 2016
Kugadzirwa kwemisa kwe # iPhone7 kwatanga. Batch remakamera module… tiri kuenda kunoshanda Foxconn padumbu rakazara.
Senguva dzose, tinofanira tirambe tisina chokwadi pamberi pekudonha kupi, asi iyi kunyanya inoita senge isingavimbike. Chinhu chakajairika mune idzi kesi ndechekuti ruzivo rwakaburitswa runoonekwa pamberi paWeibo, iyo Chinese Twitter. Zvakare, iyo tweet yakanyorwa muChirungu, iyo zvakare isingaenderane nekudonha kwakapfuura. Asi pachangu ini ndagara ndichifunga kuti kubuda kwacho hakuna kudaro uye ndiApple ane zvese zvakarongedzwa, saka tinogona kufunga kuti zvakanyorwa muChirungu nekuti vaizvida saizvozvo muCupertino, uyo, mumaonero angu, ari kumashure kwezvose uye yega yega "inodonha."
Nezvo zvakatsanangurwa, izvo zvinofanirwa kunge zvichionekwa mumufananidzo kurudyi ndeye batch ye7-inch iPhone 4.7 kamera module, iwo ayo anongova necheni imwe chete. Vamwe runyerekupe runovimbisa kuti iyi kamera ichave iine 21Mpx, iri yakawanda (maererano nenhamba yayo) kupfuura izvo zvakapihwa muiyo iPhone 6s / Plus, iyo yatinoyeuka kuti vane 12Mpx kamera.
Chero zvazvingaitika, kungave kuri kwechokwadi kana kwemanyepo ruzivo, Apple inofanira kunge yatotanga kugadzirwa kwemazhinji eiyo iPhone 7 uye kudonha kwacho hakumire kusvika munaGunyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » IPhone 7 Misa Kugadzira Inotanga; aya ndiwo macamera module ako
Kufunga kusati kwadzikira kubva kuIOS 10
Chinyorwa chepamutemo chemavhidhiyo eiyo yapfuura WWDC 2016 yave kuwanikwa